Enyemaka maka nnukwu ezinụlọ | Ndị Nne Taa
Enyemaka maka nnukwu ezinụlọ
Alicia tomero | 23/09/2021 10:00 | Atụmatụ, Ezinụlọ
Ọtụtụ ezinụlọ na -aga n'ihu na ọnọdụ adịghị ike na ụfọdụ nwere ọtụtụ ụmụaka. Maka ezinụlọ ndị ahụ chọrọ nkwado ego, ha ga -amatarịrị na enwere ihe enyemaka a na -akpọ nnukwu ezinụlọ.
Dịka iwu n'ozuzu, ndị nwere ụmụaka atọ dabere ma ọ bụ karịa, mana enwere ndị a ga -anụrịrị na ụfọdụ ụdị pụrụ iche. Iji nwee ike iburu ụdị ịdị n'otu a n'uche, a ga -atụgharị uche ya site na otu ma ọ bụ ahụ dabara nke Obodo Kwurula gị.
1 Kedu mgbe a na -ewere ya dị ka nnukwu ezinụlọ?
2 Ihe na -enyere aka dịrị nnukwu ezinụlọ
Kedu mgbe a na -ewere ya dị ka nnukwu ezinụlọ?
Ekwesịrị ịtụle ụdị ezinụlọ abụọ, ndị ahụ dị na ngalaba izugbe na pụrụiche. Ụdị izugbe bụ ebe anyị na -ahụ ezinụlọ ndị ahụ ebe ha nwere ihe karịrị ụmụaka atọ, ma ha bụ ndị nkịtị ma ọ bụ na ha abụghị. Mana anyị nwekwara ike ịgụnye ikpe ndị a:
Mgbe otu ma ọ bụ abụọ ụmụ kpụrụ ha, ndị nkịtị ma ọ bụ na ha, na otu n'ime ha nwere nkwarụ N'ebe ọdịda anyanwụ enweghị ike ịrụ ọrụ.
Ezinụlọ ndị ahụ nwere ụmụ abụọ, ndị nkịtị ma ọ bụ na ha abụghị, yana otu nne na nna nwere nkwarụ (hà ma ọ bụ karịa 65%) ma ọ bụ enweghị ike ịrụ ọrụ.
N'ime ezinụlọ nne na nna kewara ekewa ma ọ bụ ndị gbara alụkwaghịm nwere ụmụ atọ ma ọ bụ karịa.
Mgbe enwere ụmụnne nwoke abụọ ụmụ mgbei nke nna ma ọ bụ nne (ma ha nwere nkwarụ ma ọ bụ na ha enweghị) ma nọ n'okpuru nlekọta ma ọ bụ njide nke onye nlekọta.
En ezinụlọ nwere naanị nne ma ọ bụ nna nwere ụmụ abụọ dabere, mana na nke a mgbe otu n'ime nne na nna ahụ nwụrụ.
Na ezinụlọ pụrụ iche, ọ bụ maka ndị ahụ nke nwere ụmụaka ise ma ọ bụ karịa, ebe opekata mpe atọ n'ime ha nwere ma na -echekwa ego otu onye na -erughi 75% nke IPREM kwa afọ dị ugbu a.
Ihe na -enyere aka dịrị nnukwu ezinụlọ
Ihe ndị a bụ ihe enyemaka ugbu a maka nnukwu ezinụlọ. Dabere n'ụdị ị nọ na ya, ị nwere ike nweta ụdị enyemaka ọzọ:
Nnyocha ezinụlọ: Ọ bụrụ na ị na -enye onyinye na Nchedo Nlekọta, ị nwere ikike ịnakọta ego € 1.200 maka ezinụlọ otu. Ndị nke otu pụrụ iche ga -enwe ego € 2.400 kwa afọ. A ga -abawanye ya na € 600 ọzọ maka nwa ọ bụla gafere obere ụmụaka achọrọ.
una 45% ego na onyinye nchekwa Social ma di na nwunye na -arụ ọrụ ma ọ bụ na ha enweghị ike ịrụ ọrụ. Ọ bụrụ na ha nọ n'ụdị pụrụ iche, ọ dịghị ha mkpa ịrụ ọrụ na mpụga ụlọ.
Mbelata na ụgwọ ọkụ eletrik: A na -akpọ ya Ego Ọha eletrik ma ọ bụrụhaala na enyere ikike na -akarịghị 10 kW. N'ime ezinụlọ ndị otu n'ozuzu ha ga -enwe mbelata 50% na ụgwọ ahụ. Ezinụlọ nke ụdị pụrụ iche ga -enwe mkpokọta.
Ga -enwe ikike inweta ego kacha nta mgbe ha eruteghị ọkwa ọkwa ego achọrọ. Ha nwere ike ịkwụ € 996,26 kwa ọnwa mgbe ọ bụ okenye na ụmụaka atọ ma ọ bụ karịa. Ọ bụrụ na ha bụ okenye abụọ na ụmụaka atọ ma ọ bụ karịa, enwere ike inye enyemaka kwa ọnwa nke 1.033,85 XNUMX. N'ọnọdụ ndị ọzọ, enyemaka ahụ nwere ike ịkarị.
Ị ga -eru eru maka a mgbatị ezumike site n'ọrụ maka nlekọta ụmụaka. Oke karịa ọnwa 15 maka otu izugbe yana ruo ọnwa 18 maka ndị pụrụ iche.
Enwere agụmakwụkwọ na ego na ọmụmụ ruo 50% na ngalaba izugbe na mwepụ maka otu pụrụ iche. Ha ga -enwetakwa enyemaka n'ụgbọ njem ụlọ akwụkwọ, akwụkwọ na ebe iri nri
En okporo ụzọ, oké osimiri na ụgbọ okporo ígwè enwere ego 20% na ngalaba izugbe, yana 50% na ngalaba pụrụ iche. A ga -etinye mbelata nke 5% ruo 10% n'ụgwọ ụgbọ elu.
Enwere bonuses na tiketi maka ebe ngosi ihe mgbe ochie, ụlọ mgbakọ na ihe ngosi dị ka ụlọ ihe nkiri.
Ụgwọ maka inweta ụlọ, karịsịa ma ọ bụrụ na ha bụ ụlọ echekwara.
Gọọmentị na -eche ụdị enyemaka a niile, ọ ga -akwụsị iso na mgbe emezughị atụmatụ ụfọdụ emezughị. Okwu ikpe ndị a ga -akwụsị ịdị irè mgbe ọ bụla ụmụaka ahụ gbara afọ 21 (enwere mwepu), mgbe mezie alụmdi na nwunye ma ọ bụ na -adabereworị ụfọdụ ego dị elu karịa opekata mpe ụgwọ ọrụ aka ọrụ. Agbanyeghị, ọ na -atụle ịnabata n'ime afọ 2022 nnukwu ezinụlọ nye ezinụlọ ndị ahụ nwere ụmụ abụọ, mana ha ga -emerịrị usoro ụfọdụ chọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị nne Taa » Ezinụlọ » Enyemaka maka nnukwu ezinụlọ
Iji ịntanetị ndị na -eto eto: Gịnị bụ ihe egwu dị na ya?
Ịzụlite 18 Afọ
Nweta ihe ọhụrụ banyere ụmụ ọhụrụ, ndị nne na ezinụlọ.
Izu ime kwa izu
Oyi na umuaka